မည်သည့် Android application ကိုမဆို Chrome နဲ့ဘယ်လိုသဟဇာတဖြစ်စေမလဲ Androidsis
အဖြစ်အပျက်များစွာတွင်၊ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမျိုးစုံကိရိယာများကိုအသုံးပြုပါမတူညီသောလည်ပတ်မှုစနစ်များကိုလှိမ့်လည်စေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ Android တွင် Android တွင်ပြုသကဲ့သို့တူညီသောလုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်ရန်အခြေခံပြproblemနာကိုကျော်သွားခြင်းအားဖြင့်အရာရာကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်ကိုသံသယဝင်စေသည်။ သို့သော်သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပင်အလားတူခံစားချက်မျိုးရှိသည့် developer များရှိပြီး၎င်းတို့သည်မည်သည့်အရာများအတွင်းမည်သို့မည်ပုံရောက်ရှိနေကြောင်းစိတ်ကူးမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့ Android တွင်ရှိသည့်ဖြစ်နိုင်ချေနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေရန်ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာများကိုဖန်တီးသူများရှိသည်။ ကြောင်း operating system ကိုအတူ run မထားဘူးအခြားစက်၏ screen ပေါ်မှာပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ အိပ်မက်အကောင်အထည်ပေါ်ပြီလား နီးပါးနီးပါး။
ဤအဆိုပြုချက်ကို XDA Developer မှလာသည်။ Google ၏ရှေ့တွင်ရှေ့ပြေးအဖြစ်ကျော်ကြားကာယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဇာတ်ကောင်များကဲ့သို့သောအရာများကိုလုပ်ဆောင်နေသူများ၏ထင်မြင်ချက်များကိုနားထောင်ပေးသောလူသိများသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ Chrome APK Packager။ သူတို့နှင့်အတူသင့်အားသူတို့အဆိုပြုထားသောအရာသည်၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ရှုပ်ထွေးသည့်အတိုင်းရိုးရှင်းပါသည်။ တကယ်တော့၊ စိတ်ကူးကသင့် Android မှာပျော်စရာကောင်းတာ၊ ချိတ်ဆွဲတာတွေ၊ လုပ်တာတွေလုပ်တဲ့ application တွေဟာဘယ်နေရာမှာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီအတွက်တရားဝင် browser (Chrome) ၏အကူအညီကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်လိမ့်မည်။
Chrome APK Packager - သာမန်ပြproblemနာအတွက်အဖြေတစ်ခု
Android တွင်ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏအသုံးပြုသော application တစ်ခုရှိရန်နှင့်၎င်းကိုကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အခြား terminal မှရိုက်ကူးရန်စိတ်ကူးသည်အဝေးကြီးမျှော်လင့်မထားသောအရာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီကုန်သွားပြီးဂိမ်းထဲကမျောက်တစ်ကောင်ဘယ်လောက်များများကုန်သွားပြီလဲ။ ဒါမှမဟုတ်အခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာကျွန်တော်ဒီဟာကိုအသုံးချနိုင်ရင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက် app တစ်ခုအတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းသေးသေးလေးကိုမလိုချင်ဘူးလား။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကိုလုပ်ဖို့သင်လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ် Chrome APK Packager အထုပ် သင်မှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်သော XDA Developers ဆိုဒ်.
အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ ကျွန်တော်တို့ဘလော့ဂ်မှာဒီဇတ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေလိုနောက်ကွယ်မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာသိချင်တဲ့သူတွေအတွက်၊ Chrome APK Packagerငါပြောတာကဒီ application ကိုငါတို့ Android မှာ install လုပ်ပြီး run တဲ့အခါအမှန်တကယ်လုပ်ရမှာကသင်၏မိုဘိုင်း terminal ပေါ်ရှိမည်သည့် application ကိုမဆိုအသုံးမပြုပဲသိမ်းထားသည့်မည်သည့် application ကိုမဆို Chrome အတွက် extension အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ တိကျစွာဤအကြောင်းကြောင့်မည်သည့် app ကိုမဆို operating system ပေါ်တွင်နောက်ထပ်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိဘဲလှိမ့်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်နေသည်ကိုလျစ်လျူရှုလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ထိုအက်ပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ရန် Chrome ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။
အရာရာတိုင်းဟာအစီအစဉ်အရမဟုတ်ပါ။ သင် browser တစ်ခုတွင် window တစ်ခုဖွင့်ထားခြင်းသည် Android အတွက် native application နှင့်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်မတူသည်ကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုမျိုးရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည် Chrome APK Packager။ ထို့အပြင်ဤကဲ့သို့သောအရာများမရှိပါကမည်သည့် Android application ကိုမဆိုအခြားကိရိယာသို့ "porting" ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အနည်းဆုံးနာရီပေါင်းများစွာအသုံးမပြုဘဲနှင့်၎င်းတို့၏ developer များကအခြားသူများနှင့်လိုက်ဖက်သောဗားရှင်းများဖန်တီးရန်ကတိကဝတ်မရှိဘဲ လည်ပတ်မှုစနစ်များ။ လာပါ၊ လိုအပ်သောအလုပ်အားလုံးအတွက်လက်တွေ့အသုံးတည့်ပါ။
Chrome APK Packager တွင်သူတို့ပြုလုပ်ရန်အဆိုပြုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်သနည်း။ သငျသညျပြီးသားစိတ်ကိုသင်လျှောက်လွှာရှိသည် android အပြင်ဘက်မှာ chrome ကိုသုံးချင်တယ်?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » မည်သည့် Android app ကိုမဆို Chrome နှင့်မည်သို့သဟဇာတဖြစ်အောင်လုပ်နည်း
application တစ်ခုကို extension .EXE ဖြင့် android သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်
Honda Connect: ၂၀၁၅ Honda Civic အတွက် NVIDIA ၏သတင်းအချက်အလက်များစနစ်